Ukudilizwa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', i-Trump, i-Brexit (nayo yonke into exhunywe kuyo) iqalile: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-13 Juni 2019	• 12 Amazwana
Emasontweni amuva nje siye sabona ukuchithwa okulawulwayo kwegama elungile 'elungile'. Lo mshini kwakufanele umelwe yizikhwama zokuphepha eziqeqeshwe kahle: kusuka kuDonald Trump e-US, e-Marine le Pen eFrance eya eTerrier Baudet eNetherlands. Lo mkhiqizo wawuhloswe ukuqinisekisa ukuthi ukucabanga okubalulekile ngokusebenzisa abezindaba kwakunqatshelwe ekucabangeni ugobe nokuthile okuwukuphela kwabantu abaphiko olufanele. Khona-ke lo mshini wawudluliselwa kwesokudla okwedlulele futhi ube ngowomhlaba wonke ngisho nomfanyana ongathandeki futhi ongenamusa kwabesifazane.
Yiqiniso uDonald Trump usengumongameli wase-US kanti futhi inqubo ye Brexit isaqhubeka, kodwa ngibikezele ukuthi kokubili kuzoba ukuqala kokuwa. I-Trump kwadingeka iqale izimpi zokuhweba ukuze zenze i-alibi enkulu yokuwa kwezomnotho (kuseduze) kwezombuso omkhulu waseMelika. Ukuhluleka kwe-Brexit, noma nge-no-deal noma ngisho (indlela entsha kunazo) hhayi ukukhokhisa umthethosivivinywa eya eYurophu, kufanele iholele ekubhekaneni kwezomnotho e-EU. Lokhu kufanele kubonise wonke umhlaba ukuthi lo mkhiqizo "ulungile" (ngakho-ke abagxeki) yizigebengu zokuhluleka nenhlekelele.
Isizathu esimbonile uDonald Trump esicindezela iMeya yaseLondon ngesonto eledlule futhi isizathu sokubiza ngokuthi uMnuz Harry Harryle "sibi" siyisizathu esifanayo sokuthi sambonile ukuthi senza imibono engathandeki futhi sasihlobene ne-porn umlingisi. Kumele athole isithombe esiqine kakhulu, ukuze abantu bathole iphiko elihle kakhulu elizwayo ngokweqile. Leyo nhlamba ixhunyaniswe nayo yonke inhlangano yokuhamba ngakwesokudla (uphawu 'olufanele'). Yonke imakethe yokucatshangelwa kahle (i-propaganda).
Ungakwazi ukuxhumanisa lelo qembu ibe ngumkhiqizo omusha noma odala. Sesivele sibona lo mkhiqizo omdala. Le vidiyo ngezansi ibonisa ukuthi isixhumanisi salo mkhiqizo omdala sesivele senziwe kanjani. Le vidiyo ihamba nge-Facebook futhi ikhombisa ukuthi iyini injongo. Ukuphikisana kwezombusazwe nokulawulwa kwezindaba kuye kwaqinisekisa ukuthi ilungelo laba ngumkhiqizo nokuthi yonke imibono ihlanganiswe imibono efanayo kwakunqwabelana. Akusekho mayelana nombono wakho; iphuzu ukuthi uma unombono, ngokuzenzakalelayo uyingxenye yalowo mkhiqizo. Futhi lo mkhiqizo manje uhlanganiswe isinyathelo ngesinyathelo ku-brand 'yamaNazi'.
Inkulumo-mlando enobuningi ebonisa ngokuyinhloko ukuthi ukusebenzisana kwezindaba, ezombusazwe kanye nezokuxhumana kwezenhlalo kusebenza kanjani. Iifomifomu kuvidiyo ibonisa izinkomba ezicacile ukuthi umfaniswano zixhunyaniswe nokunyakaza okulungile (okuzimele). Isixhumanisi esiqondakalayo kodwa esicacile ukuthi le vidiyo yenzayo yilokho okushiwo kumzuzwana we-25e kule vidiyo: "Mhlawumbe ngiphakeme kakhulu noma yini?"Chofoza kumibhalo engezansi).
Ungabizwa inhlamba eqenjini elithile lezombangazwe noma ngakwesobunxele noma kwesokudla. Yeka ukuvota, ungahlanganyeli emdlalweni wezombangazwe wokwakha izakhi. Ekugcineni uzobekwa inhlanhla eqenjini labantu abanomthwalo wemfanelo namaNazi. Ngakho-ke ukucabanga okubalulekile kufanele kuvinjelwe kube usongo ekuzinzile nasekuthuleni.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: nos.nl
Uhlobo 'lwelungelo' kanye nesu lokumaketha elihlelwe ngokucophelela ngenhlamba
Kungani uTrump engeyona i-anti globalism kodwa enye i-aristocracy pawn
Ingabe ama-regents aseDutch athola isiphambano ngezithombe zamaNazi?
Amathegi: ukucabangela ugobe, ukuphuza, afakiwe, movie, im, isixhumanisi, brand, amaNazi, AmaNazi, nazikeule, nobuNazi, kwesokudla, Kabusha, ukucwaswa, ividiyo
13 Juni 2019 ku-13: 03
Yebo konke kusobala ... donald trump, marie le le penn futhi okokugcina futhi fvd kwaba bashing amaSulumane on lmfao. Ngicabanga ukuthi isixazululo ukufuduka okungaphezulu nakakhulu futhi abangevote ... bafuna impi yombango eNL kodwa ukuthi kumele benze ukucindezeleka, basho ilungelo lomnotho, amaSulumane ukulungiswa njll njll.
I-motto ye-masonic ihlelwe ngaphandle kwezingxabano .. Nginesiqubulo esikhulu ... i-chaos iphuma kumingcele futhi ngiqinisekise ukuthi akukho myalelo ongase uvele. Badinga ukusebenzisana kwamaqembu okulondoloza amandla okusebenza njengesikebhe sokubhujiswa okulawulwayo, ngaphandle kokuthi lokho kuqhuma kuyoba yizingxabano ezingunaphakade.
Ungavoteli futhi ukhuthaze ukufuduka kwabantu abaningi ... vele utshele abantu ukuthi izigidi eziningi zingakwazi ukufezwa.
Lowo mfundisi omusha waseSweden uthe nabo bangakwazi ukuthatha izigidi ezingu-30 izifiki. Uma befuna ngempela ukuqothula umjaho omhlophe, ngeke ngempela balinde iwashi elikhulu futhi bakuxwayise ngezitatimende ezinjalo. Ungabe uveza izinhlelo zakho lol kakhulu?
Vumela konke kuqhumeke. Ngakho zonke izitshalo zamandla enyukliya ziyobhujiswa, u-Israel, iU.SA kanye nezwe lonke lizophinde lihlaselwe .. U-Israyeli uzobuye abuyele emuva ku-Stone Age kanti abakwa-elite nabo bayoba nezandla ezingenalutho. Vele udlale umdlalo ekufeni ukuze ubone ukuthi baqaphele yini
13 Juni 2019 ku-13: 38
Isihloko esihle, vumelana ngokuphelele! Phela, isimo se-quo kungenzeka singasengozini. Hlala uhamba, ujabule ukukhokha intela, unikeze izwi lakho futhi uma liphumelela unganciphisa amandla akho okucabanga okungenani. Ukucabangela okucatshangelwayo okwenziwe ngabanqina bezinyawo abaye baphumelela ngempumelelo uhlelo lokufundiswa ...
13 Juni 2019 ku-15: 52
13 Juni 2019 ku-16: 04
Oh kahle ama-pyromaniacs ase-luciferian ashisa izindawo eziningana ezishisayo ukuze akhombe umunwe wabo kamuva. Ukungakhulumi ngama-trillions we-derivatives okwenyuka ngokwemvelo ngokungenani okungalungile kusukela ku-2008 futhi esezikhwameni zamabhange ahlukahlukene, cabanga ngoDeutsche Bank
15 Juni 2019 ku-00: 03
Ngokusho kukaChris we-IMF, kunezinye izizathu ezengeziwe (funda amaphuzu omlilo) .. faka isandla sakho esifubeni sakho (ukukhwehlela) ho kodwa but
17 Juni 2019 ku-12: 37
baseseyisinyathelo ngaphambi kwami ​​¨ ngemuva kokuhlanganiswa okuhlulekile, manje ibhange elibi le-50 billion ukubeka zonke izinkulungwane zezigidi ezivela kulo ... 😀 kahle logiki
18 Juni 2019 ku-12: 54
Kuyinto yokuzivocavoca okudabukisayo, umahluko omkhulu ngemuva kokubika kukaHannanna ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
Yebo I-Klaas (BIS) Angikuqinisekisile ngezandla zakho zasendle, igama elithi ECB noDraghi alingene empikiswaneni yakhe nhlobo, ntambama
18 Juni 2019 ku-13: 55
ukusika, ukugcoba nokukhahlela, kodwa izinsalela ze-Neanderthal zihlezi. Kuphela madurodam abantu abathandekayo
18 Juni 2019 ku-16: 33
Hahaha ukuthi uKlaas, siyazi ukuthi ubani ophethe
11 July 2019 ku-13: 33
13 Juni 2019 ku-16: 02
Kulungile lokho okubhalayo kulungile ngokuphelele!
Abantu abangacabanga ukuthi ngubani ophethe lokhu.
noma unkulunkulu noma umyalo wabhala:
16 Juni 2019 ku-16: 46
UMartin VRIJLAND uphinde ushaya izipikili ezinamakhanda. Umbono engiwamukele ngokugcwele iminyaka futhi engingayifaka kumazwi kangcono.
Kusukela ekukhunjweni komuntu, kuye kwaba nokuncintisana okukhulu nemikhiqizo yethu yomndeni. Vumela ukuthi umuntu we-serf angakwazi / abe namagugu nhlobo ...
Konke okunye okukhulunywa ngakho kaningi.
Umdlalo Omkhulu uba lula nakakhulu kulabo abaqaphe ukubuka:
ukubhujiswa okulawulwe yombuso wenhlalakahle ngokusebenzisa impi yombango (funda: ukulawulwa kwesibalo), kushaywe (kufundwe: kuhlelwe) ngokungaziphathi kahle kwabangenalwazi abangamaSulumane, okuholela ekutheni kube nokukhululeka komnotho okushiwo "okulungile" (yini egameni?) I-AHRIMAN (funda: i-Rudolph STEINER), i-REDEEMER (okungukuthi, i-catalism / i-judeo-christianism / inkolo eyodwa yezwe) iletha lokho okubizwa ngokuthi insindiso, okuzophela ngaphandle kokugqilazwa kwezimvu.
Lesi simo sonke sisebenze ngempumelelo eminyakeni embalwa embalwa. Isiqephu esihle sokudlala, uma ungibuza ...
« Ungakwazi ukuletha ushintsho kanye nokukhetha kwakho indaba!
Inkinga enkulu, Ukuphendula, Isombululo kuchazwe »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.874.186
UPatricia van Oosten op ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey